स्टोरी Archives - E mechi
प्रधानमन्त्रीनिवास नै व्यक्तिको नाममा–राजधानीमा ‘भूमाफिया’को डरलाग्दो चलखेल (भिडियोसहित)
Posted in स्टोरी
सरकारी जग्गामा व्यक्तिको रजाईं पछिल्लो समय राजधानीका सरकारी, गुठी एवम् सार्वजनिक जग्गा हडपेको न्यूज श्रृङ्खलावद्ध रुपमा आइरहेको छ । मालपोत, नापीलगायत सरकारी निकायका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भएका चलखेलबारे एकपछि अर्को तथ्य सार्वजनिक भइरहेको हो । सरकारी जग्गा हडप्नेमा धनाड्य, ठूला ब्यबसायी, नेता, उच्च पदस्थ अधिकारी, पहुँचवाला र भूमाफियालगायतको संलग्नता छ । पछिल्लो समय चर्चामा आएका केही सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र त्यसका लागि भएका चलखेलको फेहरिस्त हेरौं । ह्यात होटलले १ सय ५० रोपनी जग्गा हडप्यो– काठमाडौं, बौद्धस्थित चुच्चेपाटीमा रहेको पाँच चारे हायात होटलले १ सय ५० रोपनी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको रहस्य खुलेको छ । हायात होटलले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको विषय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कुरा उठ्यो । समितिले सांसद अग्निप्रसाद स
मसाज क्लिनिकबाट लाखौको कमाई गर्छन यी दृष्टिविहिन, आफूजस्ता अरुलाई पनि रोजगार दिँदै (भिडियो)
राजधानीको ‘हट’ एरिया ठमेलमा चिरञ्जीवी पौडेल र उनको टिमले ८ वर्ष देखि मसाज सेन्टर संचालन गर्दै आएका छन्। सिइङ ह्यान्डस क्लिनिक नामक उनको मसाज सेन्टरमा मेनेजर र सरसफाइ गर्ने कर्मचारीबाहेक सबै थेरापिस्ट दृष्टिविहीन छन्।चिरञ्जीवी जन्मजातै दृष्टीविहिन हुन् । तरपनि उनले आफ्नो जीवनलाई कहिल्यै अन्धकार हुन दिएनन् । कपिलवस्तुमा जन्मेका चिरञ्जीवीले पहिलोपटक सन् २००५ पोखरामा सञ्चालन भएको मसाज क्लिनिक ‘सिइङ ह्याण्डस्’मा पहिलो विद्यार्थीका साथै पहिलो थेरापिस्टको रुपमा कार्य गर्न थाले । त्यही उनको भेट अर्की दृष्टीविहिन लक्ष्मी अधिकारीसँग भयो । उनीहरु एउटै कलेजमा पढ्नुका साथै सँगै काम पनि गर्थे । उनीहरुको भेट प्रेममा परिणत भयो र २०६७ मा उनीहरुको विवाह भयो । पोखराकै सिइङ ह्याण्ड मसाज क्लिनिकमा काम गरिरहेका पौडेलले काठमाडौंमा आफू स्वयंले मसाज क्लिनिक खोल्ने विचार गरे । उनलाई लाग्यो, सोही मसाज क्लिनिक राज
कमाउन छाडेपछि आफन्तले नै वृद्धाआश्रम पुर्‍याए
धादिङ – उतिबेला उमेर थियो । बलियो मान्छे जसले जे काम लगाए पनि गर्न हच्किनुहुन्नथ्यो । परिवारले पनि माया गर्थे । यौवन अवस्थामा श्रीमानले धेरै माया गर्थे, जब उमेर ढल्किँदै गयो तब परिवार आफन्त सबै टाढा भए भए । श्रीमानको मृत्युपछि अलपत्र अवस्थामा पुगेकी गल्छी गाउँपालिका वडा नं-४, कार्कीडाँडा की ८७ वर्षीया सीता अधिकारी अहिले स्याहार गर्ने मानिसको अभावमा वृद्धाश्रममा जीवन-मृत्युको दोसाँधमा पुग्नुभएको छ । उमेर छँदा विवाह गरेर थाक्रे गाउँपालिकाको भुमेस्थानबाट गल्छी गाउँपालिकाको कार्कीडाँडा आउँदा श्रीमानको, घर-परिवारको माया औधी थियो । उमेर थियो । काम गर्न सक्ने थिए । सबै आफ्ना भए । केही वर्ष रमाइलो बित्यो । परिवारबाट छोरा पाउनुपर्ने बताएपछि सीता अधिकारी अन्यौलमा पर्नुभयो । छोरा वा छोरी पाउने कुरा महिलामा मात्र मात्र निर्भर नभएर महिला पुरुष दुवै मिलेर मात्र सम्भव हुने भए पनि उनले छोरा पा
विदेशी कैदीलाई पाल्दा सरकारको वार्षिक ७ करोड स्वाहा !
Posted in अर्थ, स्टोरी
काठमाडौं– बिकिनी किलरका नामले चिनिएका कुख्यात फ्रान्सेली अपराधी चाल्स शोभराज यति बेला नेपालमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् । उमेरले ७० बर्ष नाघेका उनलाई १२ जना विदेशी नागरिक हत्याको अभियोग छ । अर्का विदेशी नागरिक हुन् पिटर जोन ड्यालग्लिस । संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन)को विशिष्ट पदमा काम गरिसकेका क्यानेडियन नागरिक ड्यालग्लिस क्यानडामा पनि हाइप्रोफाईल व्यक्ति मानिन्छन् । तर, तीनै हाइप्रोफाइल व्यक्ति २०७४ चैत २४ गते मण्डन देउपुर काभ्रेबाट बाल यौन दुराचारीको आरोपमा समातिए । अहिले उनी काभ्रे जिल्ला अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । चाल्स शोभराज र पिटर जोन ड्यालग्लिस मात्र होइन, गत माघ ५ गते बेलायती नागरिक इयान रोवट कोल पनि बालयौन दुराचारको आरोपमा समातिए । अहिले उनले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । विभिन्न आपराधिक क्रियाकलपामा संलग्न भएर नेपाली जेलमा रहेका यी तीन व्यक्ति प्रतिनिधि पात्र ह
पत्नीलार्ई नायिका बनाउन खोज्दा ऋषि धमला टाट ! यसरी उड्यो धमलाको करोडौं
Posted in मनोरंजन, स्टोरी
चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले आफ्नी पत्नीलार्ई नायिका बनाउन चलचित्रमा लगानी गरेको देखियो । पत्रकार धमलाले आफ्नी पत्नी एलिजा धमलालार्ई नायिका बनाउन करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी चलचित्र अनुरागको निर्माण गरे । तर, चलचित्र व्यापारको हिसाबले असफल भयो । उक्त चलचित्र सिनेमा हलमा कहिले लाग्यो, कहिले बाहिरियो भन्नेसम्म दर्शकहरूले थाहा पाइएनन् । नायिका धमला पनि चलचित्र अनुरागपछि अरू चलचित्रमा देखापरेकी छैनन् । चलचित्र क्षेत्रलार्ई उद्योग र व्यापार व्यवसायको रूपमा लिने गरीन्छ । तर, नेपालमा कतिपयले चलचित्र निर्माणलार्ई रहर र सोखको रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आफन्तलार्ई कलाकार बनाउन नायक÷नायिका बनाउन निर्देशक बनाउन चलचित्रमा प्रवेश गराउनका लागि लगानी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाले आफ्नी पत्नीलार्ई नायिका बनाउन चलचित्रमा लगानी गरेको देखियो ।
काठमाडौं । निर्मला (नाम परिवर्तन)का पति अमेरिकामा थिए । काठमाडौंमा उनको प्रेमी थिए, बिक्रम शर्मा (नाम परिवर्तन) । शर्मासँग उनी लामो समय डेटिङमा रहिन् । कहिले ककनी, कहिले धुलिखेलमा यो जोडीले प्रेम अनुरागमा समय बितायो । घरि–घरि शारिरीक सम्बन्ध पनि जोडियो । निर्मला अमेरिका पुगिन् बिक्रम काठमाडौंमै आफ्नो पेशा व्यावसायमा व्यस्त छन् । उनीहरूको अहिलेको सम्बन्ध अपरिचित जस्तै छ । उनीहरूको सम्झौताको सम्बन्ध डिस्कोबाट सुरु भएको थियो । ‘अफिसको काम अबेर सकिएपछि दरबारमार्गको क्लव छिर्ने गर्थें, उनी पनि त्यहाँ एक्लै बसेको देखेपछि डान्सका लागि अफर गरें । केही घुट्की पियौं त्यसपछि परिचय बढ्यो’, बिक्रम विगत कोट्याउँछन्,‘एउटा सम्झौताको सम्बन्धमा केही समय रमाइलो गरौं भन्ने सल्लाह भयो । र, हामी अफेयरमा थियौं ।’ निर्मलाका पति अमेरिकामा थिए, बिक्रमकी पत्नी गृह सहरमा बैंकर थिइन् । यो सम्बन्धको सीमा
Mar292019 by emechiNo Comments
बाटोमा मकै पोलेरै करोडपति बनेकी यी आमालाई सलाम ! कामको सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
बाटोमा मकै पोलेर बेच्ने पनि करोड हुन्छन् र ? भन्ने जिज्ञासा आम मानिसमा पर्न सक्छ । तर बाटोमा करिब २२ बर्ष देखि मकै पोल्दै बेचेर करोडपति बनेकी छिन् , कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा ५३ बर्षिय अम्बिका न्यौपाने । अम्बिकाको पुरानो घर दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ६ रामकोटमा हो । उनि आफुले गरेको पेसा अर्थात ब्यवसाय बारे भन्छिन्, मैले बाटोमा मकै पोलेर बेच्न थालेको २२ बर्ष भन्दा बढि भयो, मेरो काठमान्डौं काँडाघारी हरहरमहादेब नजिकै घर छ । अम्बिकाको घरमा दुई छोरा र एक छोरी छन् । उनि आफु बिगत नसम्झने बताउँदै श्रीमान्ले छोडेको २६ बर्ष भएको बताउँछिन् । अम्बिकाको श्रीमान्ले २५ बर्षको उमेरमा छोडेर कान्छि श्रीमति ल्याएर अन्यत्र बसेको उनको भनाइ छ । श्रीमान्ले कान्छि श्रीमति लिएर आफुलाई छोडेपछि आफुले निकै कष्टपुर्ण जिबनयापन निर्बाह गरेको बताउँछिन् । अम्बिका आफ्ना छोराछोरी पाल्न
Mar262019 by emechiNo Comments
एकपटक सोच्नुहोस् । तपाईं एउटा सुन्दर स्थानमा आउनुभएको छ – गीत सुन्न, नाच्न र रिल्याक्स गर्न । एकाएक एकजना अपरिचितले युवतीले तपाईंलाई ‘चुम्बन गरुँ’ भनेर सोध्छिन् भने तपाईंलाई कस्तो महसुस होला । तपाईं अग्रसर हुनुहुन्छ कि पछि हट्नुहुन्छ । न्यूयोर्ककी फोटोग्राफर जोहान्ना सिरिङले डेनमार्कमा आयोजित रोस्किल्डे फेस्टिबलमा यो अवस्थालाई वास्तविकतामा परिणत गरेकी छिन् । उनको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रत्येक तस्बिरमा मानिसको अनुहारको भाव कैद गर्नु हो । ब्राइट साइडले जोहान्नाले मानिसहरुको चुम्बन लगत्तै तस्बिर खिचेकी छिन् । एउटा चुम्बनले कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भने यहाँ देखाउन खोजिएको छ । १. यो भन्दा फराकिलो मुस्कान अरु कुनै हुनसक्ला ? २. एक चुम्बनले आत्मविश्वासीलाई लजालु बनाइदियो ३. यो परिवर्तन हेर्नुहोस् त, कति अपत्यारिलो छ । ४. भर्खरै जे भयो तिमीले यसका लागि मलाई फोन गर्नुपर्छ ५. यस्तो ल
बेश्या संग बिताएकाे त्याे क्षण, २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहाेस , एकदम चकित पर्नुहुनेछ !!
पेसाले पत्रकार दैनिक समचारको खोजिमा हिट्ने गरेको हुन्छु । पत्रकार सबैले भन्ने गर्छन आम जनता भन्दा फरक हुनु पर्छ ! हो पनि समाज सुधार्न पत्रकारले ठुलो भुमिका खेल्छ र आम समाजले पत्रकारले लेखेका समचार र लेखहरुमा विश्वास मान्छन । समाचारको खोजिमा बेश्या संग १ घण्टा बिताउदाको अनुभव सेयर गदै छु । सबैले यस बाट केही शिक्षा लिउन भन्ने उदेश्यले । २४ र २५ वर्षको लक्का जवान एक पत्रकार पारिवारीक अवस्थाले अविबाह छ । समचारको खोजिमा भर्खरै बिकशीत हुँदै गरेको बजारमै घर र्थियो । बजारका केही होटलहरुले बेश्या केटिहरु राख्न थालेको एक हुल केटाहरुको समूह बाट सुनियो । अनुभव लिने र समचार राम्रो भेटिने आसमा मेरो मिसन त्यता सुरू भयो । १५ दिनको प्रयास पछि कसै मार्फत एक यौन कर्मी केटि संग फोनमा गफ भयो । पत्रकार म = होलो यौन कर्मी = हाई म = कहाँ हो यौन कर्मी = किन ? कोहो तिमी ? म = ए म हैउ चिनिनउ म ……यो ठा
करेन्टले हात त काट्यो तर हिम्मत र साहसले रुपाको भाग्य भने काटिएन हौसला सोरुप १/१ शेयर गर्नुहोला ..
Posted in शिक्षा, स्टोरी
काठमाडौं । शारिरीकरुपमा सबल भएका मानिसहरुको लागि समेत जीवन ज्यूँनको लागि हिम्मत, साहस र क्रियाशीला चाहिन्छ । हाँस उठ्दा दिल खोलेर हाँस्नको लागि दात चाहिन्छ,कठिन बाटाहरुलाई सहज बनाउन दुई खुट्टा संगै लोरोको साथ चाहिन्छ भने दुःख पर्दा आँखाबाट बग्ने आँशु पुछ्नको लागि सुकोमल हातको आवश्यकता पर्छ । तर यी सबै नभएको अवस्थामा जीवन कस्तो होला । सम्भव छ भन्ने प्रश्नले यहाँ ठाउँ पाउनु अस्वाभाविक होइन तर सम्भव बनाउनेहरुका लागि जहाँ जे पनि स म्भव जहाँ पनि हुन्छ नै । यस्तै लेखिएको एउटा कथाकी पात्र हुन रुपा रौतार जस्ले असम्भवलाई सम्भव बनाएर सबैलाई जिउने हौसला दिएकी छिन् । एउटा दुर्घटना जस्ले उनीसंग भएका दुई हात सदाको लागि खोस्यो । कपिलवस्तुमा रहेको वालज्योति स्कुलमा पढ्दै गरेकी रुपाका बुबा वै देशिक रोजगारीका गएका थिए । २०६२ सालको भदौमा स्कुलबाट साथीको घरमा पुगेकी रुपा घरको माथिल्लो तल्लामा पुगेको कसैलाई